के सबिता भण्डारी डिप्रेसन कै शिकार भएकी थिईन ? सवितालाई के भएको थियो? डाक्टर र परिवारको मिलेमतो थियो त? हेर्नुहोस – ostake
के सबिता भण्डारी डिप्रेसन कै शिकार भएकी थिईन ? सवितालाई के भएको थियो? डाक्टर र परिवारको मिलेमतो थियो त? हेर्नुहोस
सविता भण्डारी मृत्यु घटनाका बारेमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कुरा उठिरहेका छन् । माइती र घर पक्षकाहरुबीच उनको मृत्युको विषयमा फरक कुरा आएका छन् । माइती पक्षले घर परिवारका सदस्यले मृत्यु रोज्न बा ध्य पा रि एको दावी गरेका छन् । घर परिवारले सविता मनोरोगी भएको र उनले निकै कडा औषधि सेवन गरिरहेको बताउँदै आएका छन् ।